Zimbabwe Cricket team seal kit deal with Ihsan InternationalMbare Times
Home Sports Zimbabwe Cricket team seal kit deal with Ihsan International
Zimbabwe Cricket team seal kit deal with Ihsan International
Zimbabwe Cricket team seal kit deal with Ihsan International. The sponsorship package, worth US$30 000, will see the Pakistan-based sports goods manufacturer supplying playing, training and travel wear to Zimbabwe’s touring players and members of the support staff.
Zimbabwe Cricket has clinched a kit deal with Ihsan International for the upcoming limited-overs series in Pakistan. “I am delighted to unveil the US$30 000 kit sponsorship for the Zimbabwe national cricket team,” Ihsan International director Majid Khan said.
The new playing shirt was presented to President Emmerson Mnangagwa and his Deputies, as well as to several ministers, during a ceremony held at State House in Harare on Tuesday.
Pakistan-based sports goods
Previous articleFormer Minister Obadiah Moyo seeks relaxation of bail conditions
Next articleNeymar surpasses the great Brazilian Ronaldo